खराबीसँग नहार, तर भलाइले खराबीलाई जित! – EL-Shaddai Family Daily Bread
History of EL-Shaddai
I will Praise Your Name Always
Walk Worthy of his Calling
Blessed to go in the House of Mourning
AllBible Study Mobile Apps
Home Daily Bread खराबीसँग नहार, तर भलाइले खराबीलाई जित!
खराबीसँग नहार, तर भलाइले खराबीलाई जित!
मे ६, मगंलबार
दैनिक प्रार्थना र प्रशंसाको निम्ति आधार वचन
प्रेरित पावलले यस पाठमा, जिउँदो बलिदानकाे बारेमा व्यवाहरिक शिक्षा दिनुभएकाे छ। यही बलिदानमा हामीले पुरानाे स्वभावकाे मान्छेलाई बिर्सेर नयाँ ख्रीष्टिय मान्छेलाई हाम्राे स्वभावमा पहिरेर खराबीलाई भलाईले जित्नुपर्दछ । याे रहस्य पावलकाे जिवनबाट हेरेअाै । प्रभु पाँए पछि धेरै पटक उसलाई अाफनै फरिसि र सदुकि दाजुभाई बाट खेदाे, सतावट, निन्दा, शारीरिक यातना पाँए । तर उसले जहिले पनि यी कुरालाई ख्रीष्टमा भएर सहेर जितिदिनुभयाे, किनिक पावलले अाफनाे प्रणभन्दा ज्यादा ख्रीष्टलाई अाफनाे जीवनमा जिउँन राेजे । सतावतबाट अाफुलाई बचाउँन प्रेरित पावलले कहिल्यै झुटाे बालेन तर ख्रीष्टमा सत्य रहेर अाफनाे गवाहि दिए। पावल प्रेरित अाफनै ईस्त्राएल दाजुभाईद्वारा पेस गरिएका उजुरि बाट धेरै पटक , अलग -अलग राेमि अधिकारी र राजासामु उभिनु लगाए । पावलकाे असल विशवास र साचाे गवाहि रहेकाले राेमी सरकार बाट पनि उसले निगाह पाए यसकारण उसलाई मार्ने षड्यन्त्र सम्म ईस्त्राएलिले बनाए तर परमेश्वरकाे कृपा र उहाँकाे याेजना पूरा हुन बाँकी रहेकाेले उहाँलाई प्रत्यक समस्याबाट जाेगाँउनु भयाे ।
परमेश्वरले प्रेरित पावललाई अचम्म रीतिले चुन्नु भएकाे थियाे । एउटा छुट्टयाइएको पात्र जसलाई परमेश्वरले एउटा महान कामकाे लागि चुन्नुभयाे ; अर्थात उसद्वारा धेरै अन्यजातिहरूलाई प्रचार गरिनु पर्ने थियाे र उसले राेमी सरकारकाे सामु भएर धेरै पटक गवाहि साक्षी दिनुपर्ने थियाे कसरी ख्रीष्टले उसकाे जीवनमा परिवर्तन ल्याउनु भयाे र ख्रीष्ट नै परमेश्वरकाे पुत्र हुनुहुन्छ जाे बाैरिएर बिउतिनु भन्ने कुराकाे गवाहि दिनलाई ऊ सबै ईस्त्राएल र राेमिहरूकाे बिचमा गवाहि हुनुपर्ने थियाे।
शुरूमा प्रभुकाे सेवामा पावल हिड्दा उसले धेरै कष्टसाथ, साहस गरेर प्रभुलाई पछ्याए किनकि प्रभुका चेलाहरू समेतले उसलाई विश्वास गर्नसकिरहेकाे थिएन । प्रेरित पावलले प्रभुकाे मण्डलि र सन्तगणहरूकाे अात्मिक अवस्थालाई लिएर धेरै चिन्ता लिन्थे । हरेक मण्डलिकाे लागि उसकाे निरन्तर प्रार्थना र उहाँकाे त्यहाँ उपस्थिति हुन्थे । अन्तिम सास रहेसम्म प्रेरित पावले सबै मण्डलीलाई पत्रद्वारा उहाँहरूलाई निरन्तर प्रभुका पथमा हिड्न प्रभुकाे वचन द्वार प्रयत्न गराए। प्रेरित पावल भनुहुन्छ सम्भव भए तिमीहरूबाट जहाँसम्म हुन सक्छ, सबै मानिसहरूसँग मेलमिलापमा बस। किनकि मलाई दिइएको अनुग्रहद्वारा म तिमीहरूको बीचमा भएको हरेक मानिसलाई भन्दछु: आफ्नो विषयमा जति सोच्नुपर्दछ, त्योभन्दा बढ़ी नसोच; तर परमेश्‍वरले हरेकलाई बाँड़िदिनुभएको विश्‍वासको नापअनुसार सचेत भएर सोच! (राेमी १२:३)
अाजकाे हाम्राे पुकार; हे प्रभु मलाई हरेक दुख, सतावतमा स्थिर राख्नुहाेस र अात्मामा अान्निदत तुल्याउनुहाेस।
हामी नि प्रेरित पावल जस्तै विजय जीवन जिउन सकाैं; शरिरमा जे जस्तै भए नि। हाम्राे प्रभु कति महान, हाम्राे हरेक दुख सकंटमा भएर जाँदा बल र साथ दिनुहुन्छ, हामी उहाँकाे प्रशंसा गराै र उहाँलाई धन्यवाद चढाअाै।
Previous articleCHRISTMAS PROLOGUE
Next articleपरमेश्वरकाे दृष्टिमा असल बन्ने प्रयत्न गराै ।
His Faithfulness Renew Every Morning
प्रार्थनाको उत्तर पाएँ पछि मेरो चेताउनीलाई नभुल्
Spiritual Practical Talks3
Daily Prayer and Praise2
History of EL-Shaddai1
Bible Study Mobile Apps1
© ELSFM 2021